किस्ताबन्दीमा आइफोन किन्न चाहनुहुन्छ ?... :: कमल नेपाल :: Setopati
किस्ताबन्दीमा आइफोन किन्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ प्रक्रिया
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौँ, मंसिर ३
नेपालका लागि एप्पल उत्पादनको आधिकारिक वितरकको जिम्मा पाएको जेनेरेशन नेक्स्ट कम्यूनिकेसन प्रालिले आइफोन ८ र ८ प्लस किस्तावन्दीमा किन्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।
एकै पटक नभई आफ्नो आम्दानीअनुसार क्रमिक रुपमा भुक्तानी गर्दै जानेगरी फोन किन्न सकिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। त्यसका लागि जेनेरेसन नेक्स्टले ग्लोबल आइएमई, नबिल, मेगा, हिमालय, एनआसी एसिया, सिद्धार्थ र लक्ष्मी बैंकसँग सहकार्य गरेको छ।
बैंकहरुले आ–आफ्नो प्रक्रियाअनुसार किस्ताबन्दीमा फोन उपलव्ध गराउने छन्। नबिल बैंकका निरञ्जन मानन्धरका अनुसार क्रेडिट कार्ड हुनेले कति मूल्यको फोन किस्तामार्फत किन्न खोजेको हो सो कुरा उल्लेख गरेर आइफोन विक्रेताबाट आधिकारिक ‘कोटेसन’ ल्याएर बैंकलाई बुझाउनु पर्दछ।
त्यस्तै आयस्रोत स्पष्ट हुने कागजात पनि बैंकलाई बुझाउनुपर्दछ। यदी खरिदकर्ता व्यक्तिको आयस्रोत बैंकको ‘इएमआइ’ को मापदण्ड अनुकुल देखिएमा सो व्यक्तिलाई किन्न खोजेको आइफोनका लागि इएमआईको सुविधा उपलब्ध गराइन्छ।
क्रेडिट कार्ड नभएको खण्डमा फोटो, नागरिकताको फोटोकपी र बैंक स्टेटमेन्ट (आवश्यक परेमा मात्र) सहित आयस्रोत खुलाएर ‘इएमआइ’ फारम भरी कार्ड लिन सकिन्छ।
मानन्धरका अनुसार क्रेडिट कार्ड बनाउन ५ हजारसम्म शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। आइफोनको आधिकारिक विक्रेता मध्येको एक इभो स्टोरका इरोस श्रेष्ठका अनुसार इएमआई मार्फत आइफोन किन्दा आइफोनको वास्तविक मूल्यमा १२ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ।
इएमआई मार्फत आइफोन किन्दा खरिदकर्ताले १२ देखि १८ महिनाभित्रमा किस्ता तिरिसक्नुपर्ने छ। तर सुरुमा गरिने भुक्तानी अर्थात डाउनपेमेन्टमा भने बैंकहरुको बेग्ला बेग्लै नियम छ। कुनै बैंकले बिना डाउनपेमेन्ट किस्ताको सुविधा दिने गरेका छन् भने कुनैले २० प्रतिशत अनिवार्य गरेका छन्।
त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंककी गिता श्रेष्ठका अनुसार सो बैंकमा किस्ता बापत थप रकम तिर्नुपर्ने छैन। आइफोन ८ तथा आइफोन ८ प्लस नेपाली बजारमा ६४ जीबी र २५६ जीबी स्टोरेजमा मात्र उपलब्ध छन्। यी फोन गोल्ड, सिल्भर र स्पेस ग्रे कलर अप्सनमा छन्।
आइफोन ८ को ६४ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्टको ९८ हजार ५ सय तथा २५६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्टको १ लाख १९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै आइफोन ८ प्लसको ६४ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्टको १ लाख १२ हजार ५ सय र २५६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्टको १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ।
इभो स्टोर, ओलीज, फ्यूचर वर्ल्ड, आइस्टोर (राइजिङ मल) सिजी स्टोर (नक्साल), क्वालिटी कम्प्यूटर (बिर्तामोड), कम्प्यूटर सेल्स सेन्टर (बुटवल), आरपीएल ग्रुप (बिर्तामोड), न्यू एटुजेट मोवाइल हाउस (नारायणगढ) बाट मात्र फोन आधिकारिक रुपमा खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।
यी फोनहरुको खरिदमा टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलको सहकार्यमा ८ महिनासम्मलाई प्रति महिना २ जीबीका दरले निशूल्क डाटा प्राप्त गर्न सकिने छ। कम्पनीले आधिकारिक च्यानलबाट सक्कली भ्याट बिल लिएर मात्रै फोन किन्न आग्रह गरेको छ। एप्पलका उत्पादनहरुमा १ वर्षको वारेन्टी रहेको छ।
कम्पनीले नेपालमा ‘ग्रे मार्केट’ बाट आइफोन भित्रने गरेको भन्दै त्यस्ता उत्पादन नकिन्न अनुरोध समेत गरेको छ। कम्पनीकी प्रद्धिना सिंहको भनाइमा त्यस्ता सेटहरुमा भने भ्याट बिल, वारेन्टी र त्यस पश्चातको सुविधा, जेनेरेसनको होलोग्राम अंकित इएमआई रजिस्ट्रेसन तथा किस्ताबन्दी मार्फत खरिद गर्न सकिने सुविधा समेत पाइँदैन।
अर्कोतर्फ त्यस्ता फोनलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले जुनसुकै बेला पनि सेवा बन्द गरिदिन सक्छ। भ्याट बिल बिना र इमाआई रजिस्टर नगरिएका आइफोन नकिन्न उनले अनुरोध गरिन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, मंसिर ३, २०७४, १२:४१:१५